वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : June 2011
वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ June 29, 2011
अध्यापनरत क्याम्पसमा सकृय एउटा विद्यार्थी समाज Talking Minds ले तीन दिने कार्यशाला आयोजना गरेको थियो केहि दिन पहिला। ३५-४० जना विद्यार्थी सहभागी थिए यो कार्यशालामा। कार्यशालामा बिभिन्न विषयका प्रस्तुतिहरु र फिल्ड भ्रमण समेटिएका थिए। कार्यक्रम आयोजक भाईबहिनीहरुको सीप र लगन प्रशंशायोग्य थियो। कार्यक्रम आयोजनाको स्तर नि:सन्देह कुनै उत्कृष्ट पेशेवरको जत्तिकै थियो। त्यहि कार्यक्रमको पहिलो दिनको पहिलो प्रस्तुति मेरो थियो। मैले Blog - A Tool for Creative Expression शीर्षकमा प्रस्तुति तयार पारेको थिएँ। ब्लगको ईतिहास, नेपाली ब्लग जगतको कुरा र आफ्नो अनुभव आदि समेटेको थिएँ। फेरि ब्लगभन्दा पनि लोकप्रिय हुँदै गईरहेका सामाजिक सञ्जाल आदिका कुरा पनि आउनेनै भयो जोडिएर।-------------------------------------------------------------------त्यहि प्रस्तुति बनाउन ईण्टरनेट चहार्दा भेटिएका यी केहि जानकारीहरुका साथ बीट मार्न चाहन्छु आज।
- More that 164 million - number of blogs the blog identified by the blog search engine BlogPulse - 600 million – People on Facebook at the end of 2010. - 250 million – New people on Facebook in 2010. - 30 billion – Pieces of content (links, notes, photos, etc.) shared on Facebook per month. - 70% – Share of Facebook’s user base located outside the United States. तपाईँका दिन शुभ रहुन्! Posted by
केहि समय पहिला रेडियो नेपालको क्षेत्रिय प्रसारण केन्द्रको साहित्यिक कार्यक्रम 'साहित्य-सृजना' को एक भागमा मसंगको साहित्यिक कुराकानी प्रसारण भएको थियो। आज त्यहि कार्यक्रमको रेकर्डिङ्ग यहाँ राख्दैछु।
हिजो म मुक्तक मञ्च-पोखराको नियमित मासिक मुक्तक वाचन कार्यक्रममा भाग लिन पुगेको थिएँ। कार्यक्रम नदीपुरस्थित बालमन्दिरको विद्यालय भवनको एउटा (कक्षा)कोठामा भएको थियो। यो कार्यक्रम हरेक महिनाको अन्तिम शनिबार आयोजना हुन्छ।
संयोगवश, हिजै मुक्तक मञ्चको अधिवेशन पनि परेको रहेछ। नयाँ कार्यसमिति चुन्ने प्रकृया जारी थियो म पुग्दा। मैले बुझेसम्म, बहुमतको चाहना रहेको सर्वसम्मत कार्यसमिति बन्न सकिरहेको थिएन। त्यति धेरै आर्थिक कारोबार नहुने सानो संस्था भएपनि विवादका विषयवस्तु भने निक्लिहाल्दा रहेछन भन्ने चर्चा चलिरहेको थियो। अन्त्यमा, प्राज्ञ तीर्थ श्रेष्ठ, कवि-गीतकार प्रकट पगेनी 'शिव', कवि विष्णु अल्पविराम लगायतका वरिष्ठ श्रष्टाहरुको सकारात्मक 'हस्तक्षेप' पछि नयाँ कार्यसमिति बन्यो।
नयाँ कार्यसमितिको पदस्थापन पछि मुक्तक मञ्चको ३७औं मुक्तक वाचन कार्यक्रम शुरु भयो। देशप्रम, राजनीतिक गतिहीनताप्रतिको आक्रोश र मायाप्रेमका विषय समेटिएका थुप्रै सटीक र सुरुचिपूर्ण मुक्तकहरु सुन्न पाईयो। कार्यक्रममा नियमित भाग लिने श्रष्टाहरुका ब्यक्तिगत जीवनका कुरालाई समेटेका मुक्तक समेत वाचन गरिएका थिए। मुक्तकका सवालमा पोखरा एउटा अग्रणी ठाऊँ हो। यहाँ पैंतीस वर्ष अगाडिनै 'टिकटमा मुक्तक' सुन्ने कार्यक्रम आयोजना भईसकेको रहेछ। प्राज्ञ तीर्थ श्रेष्ठ पैंतीस वर्ष अघि त्यस्ता कार्यक्रम गर्न गर्नुपरेको संघर्षका कुराहरु स्मरण गर्नुभएको थियो आफ्नो बक्तव्यमा। अहिले पनि बेलाबखत 'टिकटमा मुक्तक' कार्यक्रमहरु आयोजना भईरहन्छन्। आऊँदो असार १७ गते प्राज्ञ श्रेष्ठकै 'एकल मुक्तक कार्यक्रम' आयोजना हुँदै रहेछ। मैले आफ्ना पूराना चार मुक्तकहरु वाचन गरेको थिएँ।
आज त्यसै कार्यक्रमका दुई स्रष्टाहरुका मुक्तकहरु यहाँहरु समक्ष पस्किने अनुमति चाहन्छु। मुक्तक उपलब्ध गराईदिनुभएकोमा श्रष्टाद्वयलाई हार्दिक धन्यबाद!
-एकदत्त लम्साल ‍-१-
जस्तो रोप्यो उस्तै फल्छ भन्ने था' छैन कि
आलटाल गर्दा समय टल्छ भन्ने था' छैन कि
संविधान बनाउन अझै ग-यौ भने ढिलासुस्ती
सडकमा फेरि मशाल बल्छ भन्ने था' छैन कि ।
दिनभरि काम गर्ने ज्यामी भोको छ यो अझै निर्धन दुखारीलाई बेदनाको पोको छ यो अझै
जसले मह काढ्छ यहाँ उसैले हात चाट्छ
गरीब जनता न्याय नपाई रो'को छ यहाँ अझै।
-मन क्षेत्री (lash_alive@yahoo.com)
सचिव-गजल सन्ध्या, पोखरा
बडो धूमधामको रमिता हुनेछ
म लाश हुनेछु र मेरो चिता हुनेछ
जलाउनुअघि एकपटक तलाशी लिनुहोला
खल्तीमा कि गजल कि कविता हुनेछ ।
खल्तीभित्रै हात हालेर चोर्नेहरु छन्
दलालीमा कालो धन जोर्नेहरु छन्
अचेल यस्तै हालखबर सुन्छु पत्रकारको
कोहि भने भोकभोकै मर्नेहरु छन् ।
दिन होस् न रात होस्
प्रियसीको साथ होस्
त्यसपछि भने केहि नहोस्
कोहि किन बर्बाद होस् ।
"ए---गाडीले मान्छे किचेछ। छिट्टो एम्बुलेन्स बोलाउनुप-यो।""------------------------""भयो, भयो! बोलाउनुपर्दैन। मान्छे होईन, नेता पो रै'छ।"
**************** - **************